အီဂျစ်ပိရိမစ်များပေါ်က "ဖာရိုဘုရင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ခုန်လွှားခြင်း” - Xinhua News Agency
အီဂျစ်ပိရိမစ်များပေါ်က "ဖာရိုဘုရင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ခုန်လွှားခြင်း”
အီဂျစ်နိုင်ငံ ဂိုင်ဇာပိရိမစ်ကြီးများ၌ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပသည့် “ဖာရိုဘုရင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ခုန်လွှားခြင်း”ဆိုသည့် လေထီးခုန်ပွဲတော်အတွင်း လေထီးခုန်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုင်ရို ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
စတုတ္တအကြိမ်မြောက် “ဖာရိုဘုရင်တစ်ဦးကဲ့သို့ ခုန်လွှားခြင်း”ဆိုသည့် လေထီးခုန်ပွဲတော်ကို အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့တော် ဂိုင်ဇာရှုခင်းသာနေရာရှိ ဂိုင်ဇာပိရိမစ်ကြီးများ၌ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံ နှင့် ဒေသ ၃၀ ခန့်မှ ကျွမ်းကျင်သူ နှင့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ လေထီးခုန်သမား ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်ရန် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာသို့ ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကား”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၇ ရက်ကြာကျင်းပသည့်ပွဲတော်သည် အီဂျစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအထွေထွေမြှင့်တင်ရေး နှင့် အထူးသဖြင့် အားကစားခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Mideast in Pictures: “Jump LikeaPharaoh” over Egyptian pyramids
CAIRO, Nov. 1 (Xinhua) — The fourth edition of the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival kicked off on Monday at the Pyramids of Giza scenic spot in Egypt’s capital Cairo, attracting over 200 professional and world champion skydivers from some 30 countries and regions.
Themed “Peace Message from Egypt to the World,” the seven-day event aims to promote Egyptian tourism in general and sports tourism in particular.
Photo 1 – A skydiver flies over pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Photo2– A skydiver flies over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Wang Dongzhen)
Photo3– A skydiver flies over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Wang Dongzhen)
Photo4– A skydiver flies over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Photo5– Skydivers fly over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Sui Xiankai)
Photo6– A skydiver flies over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Wang Dongzhen)
Photo7– Skydivers flies over the pyramids during the “Jump LikeaPharaoh” skydiving festival held in the Pyramids of Giza, Egypt, on Nov. 1, 2021. (Xinhua/Sui Xiankai)■